RASMI: Kooxda Inter Milan oo soo bandhigtay funaanadda 1-aad ee fasalka 2017-2018 + Sawirro – Gool FM
Mid ka mid ah xiddigaha Manchester United oo noqday bartilmaameedka ugu sarreeya ee Kooxda Paris Saint-Germain
Tababare Jurgen Klopp oo si adag uga hadlay wararka sheegaya in laga ceyrin karo shaqada Kooxda Liverpool
“Ilaahay ayaa mahad leh, waan xusuusan doonaa illaa xabaasha goolkaan uu isiiyey Messi” – Yuu u hibeeyey Ilaix Moriba goolkiisii ugu horreeyey ee Barcelona?
Yaa guulo badan labada Kooxood ee Man United iyo Man City ka hor kulankooda caawa ee Manchester Derby??
Kooxaha Liverpool, Manchester United, AC Milan, Real Madrid & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono SHANTA horyaal ee ugu waa weyn Yurub
Horudhac: Manchester City vs Manchester United… (Rikoorrada la yaabka leh ee u yaalla Red Devils oo saadaalinaya ciyaartan)
Horudhac: Atletico Madrid vs Real Madrid… (Darbiga caasimadda Spain oo soo nooleyn kara loollanka La Liga)
Horudhac: Liverpool vs Fulham… (Reds oo qarka u saaran inay diiwaan geliso rikoor aysan marna ku riyoon)
Barcelona oo guul ay u qalantay kaga soo gaartay kooxda Osasuna Estadio El Sadar… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Osasuna iyo Barcelona ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
RASMI: Kooxda Inter Milan oo soo bandhigtay funaanadda 1-aad ee fasalka 2017-2018 + Sawirro
Raage May 25, 2017
(Milano) 25 Maajo 2017 – Kooxda Inter Milan ayaa ugu dambayn si rasmi ah usoo bandhigtay funaanadda 1-aad ee fasal-ciyaareedka soo aaddan ee 2017-2018 iyadoo durba la iibsan karo funaanadda Nerazzurri.
“Funaanadda cusub ee Inter waxaa laga tixraacay magaalada Milano, waxaana loo adeegsadey tiknolojiyadda Dri-FIT technology. Funaanaddii soo jireenka ahayd ayaa lagu daray taabasho casri ah, iyadoo uu magaca“Nerazzurri” uu ka muuqdo qaybta kallarka.” ayaa lagu yiri war rasmi ah oo kasoo baxay Inter.
Kaddib u soo bixitaankii Champions League-ga yey ku aadi doontaa Manchester United?
Jamaahiirta Man United oo xalay soo bandhigay maaliyadda Antoine Griezmann